Wheel Loader Fekitori - China Wheel Vanotakurisa Vagadziri, Vatengesi
WIK20F Gumbo rinotakura
WIK20F loader performance parameters Parameter paramende kukosha Kapteni (pasi pebhaketi pasi) mm 553530 Injini Upamhi (kunze kwegumbo) mm 188010 Upamhi hwebhaketi (mm) 19005 Injini Kureba (pamusoro pecab) (mm) 179010 Wheelbase (mm) 245015 Wheel Pitch (mm) 14805 Minimum clearance (mm) 2805 Rated loadkgrated kurodha 2000 Zita remugomo chinzvimbom3 1.0 huwandu hwese huremu 550030 Kumhanya kwega giyaKm / h 1 Pamberi, giya rekutanga 90.5Forward, yechipiri giya 221 1Step b ...
WIK Chigadzirwa Makomborero Akavimbika uye anogara kwenguva refu: Heavy mutoro furemu, yakavimbika mapuraneti drive drive, yakareba yekugadzirisa nguva. Kubudirira kwepamusoro kwekushanda: simba rakasimba, simba rinokwira, otomatiki kuenzanisa, kushanda kwekubatanidza, kushanda kwakanyanya kweforiklift. Simba rekuchengetedza hupfumi: yakaderera kumhanya Weichai Steyr injini, hombe dhizaini pombi yekudyidzana, inoshanda simba yekuchengetedza. Kushanda kwakanaka: panoramic cab, ergonomic dhizaini, mubato wevatyairi, chigaro chikuru. Yepamberi kutonhora system: tembiricha yemvura, oi ...
WIK867 Wheel rinotakura
WIK Main maratidziro uye mavara eWIK867 anotakura mainfeature 1Full hydraulic mutyairi manejimendi, akareruka anochinjika, micro akanakisa mhedzisiro. 2Paviri pombi confluence inoshanda sisitimu, coaxial kuyerera kunosimudzira kudhiraivhu, simba-yekuchengetedza mhedzisiro inoshamisa. 3dvanced otomatiki bhaketi rakapfava basa, iri nyore kubata, kuderedza kusimba kwevashandi kwemutyairi. 4Advanced otomatiki bhaketi rakapfava basa, iri nyore kubata, kuderedza kusimba kwevashandi kwemutyairi. 5ZSingle ...
WIK866 Wheel rinotakura
WIK Main maratidziro uye mavara eWIK866 anotakura mainfeature 1Full hydraulic mutyairi manejimendi, akareruka anochinjika, micro akanakisa mhedzisiro. 2Paviri pombi confluence inoshanda sisitimu, coaxial kuyerera kunosimudzira kudhiraivhu, simba-yekuchengetedza mhedzisiro inoshamisa. 3dvanced otomatiki bhaketi rakapfava basa, iri nyore kubata, kuderedza kusimba kwevashandi kwemutyairi. 4Advanced otomatiki bhaketi rakapfava basa, iri nyore kubata, kuderedza kusimba kwevashandi kwemutyairi. 5ZSingle ...
WIK948 Gumbo rinotakura
WIK Main marondedzero uye mavara eWIK948 anotakura 1 Central yakatsanangurwa furemu, diki kutendeuka nharaunda, nhare uye inoshanduka, lateral kugadzikana, kureruka kwekushanda munzvimbo yakatetepa. 2 Easy-to-read gauges inoratidzira uye ergonomically yakagadzirirwa kutonga kunoita kuti kutyaira kuve nyore uye kugadzikana 3 Mhepo pamusoro pe hydraulic disc brake pane mana mavhiri system uye inopera brake inoshandiswa mune brake system, iyo ine rakakura brake simba uye inoita yakagadzika brake uye yakakwirira chengetedzo 4 Yakazara hydraulic kudhiraivhu, magetsi switch tr ...
WIK938 Gumbo rinotakura
WIK Main maratidziro uye mavara eWIK938 anotakura 1 Central yakatsanangurwa furemu, diki kutendeuka nharaunda, nhare uye inoshanduka, lateral kugadzikana, kureruka kwekushanda munzvimbo yakatetepa. 2 Easy-to-read gauges inoratidzira uye ergonomically yakagadzirirwa kutonga kunoita kuti kutyaira kuve nyore uye kugadzikana 3 Mhepo pamusoro pe hydraulic disc brake pane mana mavhiri system uye inopera brake inoshandiswa mune brake system, iyo ine rakakura brake simba uye inoita yakagadzika brake uye yakakwirira chengetedzo 4 Yakazara hydraulic kudhiraivhu, magetsi switch tr ...
WIK936 Gumbo rinotakura
WIK Kutanga, zvigadzirwa zvakanakira Nyika II. Injini yekumisikidza,, inowirirana inoenderana,, inovandudza traction,, peturu kushandiswa kusvika5% Wedzera mabhakiti, wedzera kugadzirwa12% · 18Mpa inoshanda hydraulic system, inoshanda More huremu uye, kutakura huremu Kukwirisa kuregedza kunowedzerwa kusvika ku 3.1, zvinoenzana ne ZL50 modhi Iyo nyowani kutonhodza sisitimu dhizaini, iyo ambient tembiricha zvinodiwa zve -20 kusvika 43degrees Celsius Iyo injini yakaiswa neyekuwedzera, kuti iwedzere kuvandudza cab, r ...
WIK836 Gumbo rinotakura
WIK Kutanga, zvigadzirwa zvakanakira Kuvimbika uye kusimba: yakakura yakagadziriswa shaft dhizaini system, iyo yakazara furemu yakave yakareba-kwenguva ongororo, hupenyu hwesimba zvikamu zvakawedzerwa zvakanyanya. Kubudirira kwaJobho: Kukwira kwakasimba uye kudhonza, kushanda zvakanyanya. Simba-rinoponesa hupfumi: gadziridza yakaderera-mhini injini, hombe yekumhanyisa diversion hydraulic system, simba kugona. Kugadzikana kushanda: nyore kushanda, kudhiraivhira, ruzha rwakaderera. Yepamberi kutonhora sisitimu: kushandiswa kwemvura-kutonhora transmiss ...
WIK30F Gumbo rinotakura
WIK Unyanzvi parameter yeZLJ30F loader Performance yakatemwa kurodha 3000kg huremu hwese 9600kg bhakiti inokwana 1.8m3 maximum traction simba 97KN maximum breakout simba 127KN maximum grade kugona 30 maximum dump urefu 2900mm maximum dump kusvika 900mm yakazara dimension (LWH) 731423502470mmmm minimum turning radius 5097mm Injini yemhando LR6A3LR22 / 0920 mhando Yakajairika njanji - * HAPANA. ye cylinder-bore * sitiroko 6 ...
WIK28F Gumbo rinotakura
WIK28F inoremedza parameter Injini 1, Injini yetrailer inoshandisa yeBritish Ricardo Technology, simba rakasimba, 2, Mushini unotora firita yemafuta, iyo firita mhedzisiro yakanaka, yakakodzera kushanda mune zvakatipoteredza nehukuru hweguruva; 3, Iyo yekuzadza sisitimu inotora yekuputika-chiratidzo mhando, kushoma utsi, kushoma kusvibiswa, pasi ruzha, yakanaka nharaunda chengetedzo maturo, inokodzera kwazvo kushanda munzira kana yepasi pevhu marasha; 4, Chivharo cheinjini chakagadzirwa chepamusoro-simba jira simbi, iri tambo ...